Ogaden News Agency (ONA) – Hotel weyn iyo bakhaar (Mall) uu lahaa ururka Wayaanaha ee TPLF oo la gubay
Hotel weyn iyo bakhaar (Mall) uu lahaa ururka Wayaanaha ee TPLF oo la gubay
Posted by ONA Admin	/ April 17, 2012
Warar aan ka soo xiganay shabakadda Ethiopian review ayaa sheegaya in dagaalyahanka ururka isku magacaaba Ethiopian Unity and Freedom Forces (EUFF) ay dhulka la simeen Hotel iyo bakhaar (Mall) weyn oo ka dhisnaa magaalada Metemma ee xadka waqooyiga Itobiya.
Sida uu yidhi nin ku hadlay magaca ururka EUFF oo shabakadda ER ay sheegtay inay ka xaqiijisay dad goobjoogayaal ahaa, waxaa weerarkan lagu qaaday habeenkii Arbacada Hotel-ka loo yaqaano Khartoum Hotel oo ah meel ay si gaar ah ugu kulmaan sirdoonka Wayaanaha. Gabadha leh Hotel-ka oo lagu magacaabo Wzr. Tsehai waxay ka mid tahay xubnihii hore ee ururka Wayaanaha ee TPLF.
Weerarka Hotelka waxaa ku xigay bakhaar weyn oo u dhawaa goobta oo sidoo kale dab la qabadsiiyay oo dhulka lala simay. Bakhaarka waxaa leh xubin ka tirsan ururka laga nacay Itobiya ee TPLF oo lagu magacaabo Haddish Berhane oo hadda ah madaxa sirdoonka Kililka Amxaarada.
Waxay wararka intaa ku dareen in isla kooxdan dagaalyahanka ah ay June 2011kii ku gubeen magaaladaGondar11 bakhaar oy lahaayeen TPLF-ta.
Qawmiyadda Amxaarada ayaa aad u kacsan ka dib markii cadaadis badan ay saareen Wayaanaha oo dhul badan laga soo barakiciyay, waxayna isku raaceen inay bilaabaan halgan hubaysan oy iskaga xoreeyaan Wayaanaha, ka dib markay u cadaatay in aanay jirin dimoqraadiyad dhab ah. waxaa u cadaatay hadda shacabka Itobiya in aanay ogolayn ururka TPLF cadaalad iyo sanduuqa duurashada in xukunka lagula kala wareego.